Tafiditra anaty audio ny teatra an-trano
Ankehitriny, mihamaro ny olona mirona hametraka rafitra teatra an-trano ao an-trano. Miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny fari-piainan'ny olona, ​​mihamitombo hatrany hatrany ny fepetra takian'ny olona amin'ny kalitaon'ny fiainana. Mpinamana maro izao no manangana teatra an-trano ao an-tranony, amin'izay ...
Inona avy ireo fitaovana tsara ho an'ny haingon-trano fanamafisam-peo
Misy lingo ao amin'ny sehatry ny audio, "Milalao fitaovana amin'ny voalohany, milalao tariby ary manaova tazo." Azo jerena fa ny famolavolana dia tena manandanja tokoa amin'ny haingon-trano amin'ny teatra an-trano ao amin'ny villa, ary ny famolavolana insulation tsara dia nahasarika ny sain'ny maro ...
Azo ampiasaina amin'ny KTV ve ny teatra an-trano?
Amin'ny indostrian'ny nentim-paharazana, ny fanaingoana manokana no ho fanjifan'ny mpanjifa. “Ao amin'ny fiarahamonina maoderina, tsy misy tsy fahampiana olona ambony izay mankafy manokana ny mpanjaitra manokana, tanora sangany manana kalitao avo lenta ary mpitarika indostria manana fifandraisana ara-kolontsaina matanjaka. Ny mpanjifa sinoa no ...
Fomba famolavolana teatra sy haingon-trano
Voalohany, andao jerena ireo zavatra homarihina: 1. Tandremo ny haben'ny efitrano Voalohany indrindra, diniho ny haben'ny efitrano. Faharoa, zava-dehibe ny hijerena ny ins insulateur, ny fitrohana ny feo ary ny fihanaky ny fitaovana ao amin'ny teatra an-trano. 2 mifanandrinana amin'ny ...
Inona ny antsipiriany tokony hojerena rehefa manangana rafi-tsarimihetsika sy fahitalavitra tena tsara
Ny rafi-tsarimihetsika sy fahitalavitra avo lenta dia tsy vitan'ny vokatry ny fiombonan'ny fitaovana audio-visual, fa koa mifandray akaiky amin'ny volavolavinao. Raha raisina tsara ny antsipirian'ny famolavolana anao dia hampiroborobo ny vokatry ny efitrano fandraisam-peo ao an-tranonao manontolo ...
Efa nokasihinao ve ny fady amin'ny fampiasana audio ao amin'ny efitrano filma sy fahitalavitra?
Miaraka amin'ny lazan'ny fitaovana fampitaovana ao amin'ny efitrano fanaovana sarimihetsika sy fahitalavitra ary ny fitombon'ny mpampiasa ny efitrano fanaovana horonan-tsary sy fahitalavitra, fitaovana avo lenta maro no niditra tamim-pahombiazana tamin'ny fiainan'ny mpampiasa tao amin'ny efitrano filma sy fahitalavitra. Audio, amin'ny maha fitaovana lehibe azy, dia ampahany tena ilaina amin'ny sarimihetsika sy tel ...
Ny olana madinidinika fahita indrindra atrehana amin'ny fananganana rafitra audio-visual
Mbola ilaina ve ny fahitalavitra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny? Amin'ny vanim-potoanan'ny Internet amin'ny finday, na ny ray aman-dreny aza dia efa nanomboka nandry teo amin'ny sofa ary nijery horonantsary sy vaovao tamin'ny findainy, ary efa ela no novonoina ny fahitalavitra. Ny efitrano fandraisam-bahiny koa tsy mety ho kamo. Ilaina ny hijeren'i Joule karazana ...
Inona no tokony hataoko raha ny audio-visual system an-trano ihany no mifoka feo fa tsy feon'ny feo?
Rafitra audio-visual ao an-trano: mazàna diniho ireto teboka dimy manaraka ireto ho an'ny insulateur feo sy ny fitrohana ny feo. 1. Ny feon'ny rafitry ny audiovisual dia azo tanterahina amin'ny fomba maro: Voalohany, safidy mety amin'ny fitaovana manintona feo. Fa diniho ihany koa ireo fitaovana manaitra feo ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny power amplifier an'ny rafitra audio-visual?
Ny rafi-peo-maso feno dia misy fantsom-pitaovana fanampiana sy fitaovana marobe, toy ny audio, loharanom-pamantarana, fanamafisam-pahefana, CD player, sns. Ny rafitra fanamafisam-peo dia tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana ireo vokarin'ny rafitra audiovisual avy amin'ny loharano famantarana mankany amin'ny amplifier herinaratra , avy amin'ny fahefana a ...
Ahoana ny fanatsarana ny kalitaon'ny feo playback ao amin'ny teatira sarimihetsika
Araka ny fantatsika rehetra, ny tontolon'ny fampisehoana an-tsarimihetsika sy ny efitrano fahitalavitra dia misy fiatraikany lehibe lavitra amin'ny vokatra playback an'ny rafitra audio noho ny fitaovana audio hafa. Na dia misy fomba maro hanatsarana ny tontolon'ny feo aza, ny fanodinana be loatra ny studio sy ny fahitalavitra dia ...
Rafitra Audiovisual Ahoana ny fisafidianana
Hatsarao ny kalitaon'ny feo miverina
Araka ny fantatsika rehetra, ny tontolon'ny fampisehoana an-tsarimihetsika sy ny efitrano fahitalavitra dia misy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny vokatry ny rafitry ny feo noho ny fitaovana audio hafa. Na dia misy fomba maro hanatsarana ny tontolon'ny feo aza, ny fanodinana be loatra ny studio sy ny studio amin'ny fahitalavitra dia hahatonga ny zavatra ...
Tokony apetraka amin'ny rindrina ve ny sinema tsy miankina na hapetraka any ivelany ny feo?
Tokony hiditra amin'ny rindrina ve ny sinema tsy miankina na hametraka stereo ivelany? Toa tsotra be ity zavatra ity. —— Na apetraho mivantana eo ivelany toy ny Hi-Fi nentim-paharazana, na apetraka mivantana ao anaty rindrina, ampidiro amin'ny rindrina, na apetraka mivantana ao ambadiky ny efijery miaraka amin'ny efijery feo aza. Tena ...
Mbola ilaina ve ny fahitalavitra efitrano fandraisam-bahiny? Amin'ny vanim-potoanan'ny Internet finday, na ny ray aman-dreny aza dia efa nanomboka nandry teo amin'ny sofa ary nijery horonan-tsary sy vaovao tamin'ny findainy, ary efa ela no novonoina ny fahitalavitra. Ny efitrano fandraisam-bahiny koa tsy mety ho kamo. Ilaina indraindray ny mijery seho isan-karazany ...
Loharano: Internet Add Time: 2020-11-05 Tsindrio: ny rafi-pampitam-peo feno dia ahitana faribolana sy fitaovana fanampiny, toy ny audio, loharanom-pamantarana, fanamafisam-pahefana, CD player, sns. Ny rafi-peo no tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana ny vokatry ny rafitra audiovisual avy amin'ny signal ka ...
Ilaina ve ny mampiasa akora fitsaboana akustika?
Manaraka izany, hiresaka momba ny fitsaboana akustika amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mahazatra izahay. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny endrika efitrano fandraisam-peo natao an-trano sy any ivelany dia mampiasa fitsaboana akustika amin'ny lehibe kokoa na ambany kokoa, indrindra ao anatin'izany ny fanamafisam-peo sy ny fanaparitahana. Mazava ho azy fa ny vahaolana ambony sasany dia mampiasa akusty afangaro ...
Paikady fananganana teatra tsy miankina fidirana an-tsehatra, mila mahafantatra kely ianao
Rehefa mandao an'i Coke ny post-90s ary mandray ny thermos, rehefa maniry mafy ny fahamarinan-toerana sy mandro eo amin'ny faribolan'ny namana ny post-80, dia mila misento ny majika amin'ny fotoana ianao. Ary amin'ny fiainam-pianakaviana maoderina, inona ny zava-baovao nanintona ny sain'ny tsirairay? Izay no tokony ho ankafizin'ny vaovao an'ny tsy miankina ...
Tena tsara ve ny fanaovana sinema tsy miankina amin'ny lakaly?
1. Ny zava-dehibe indrindra tokony hodinihina dia ny famoahana ny tany ambanin'ny tany. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manamarina tsara ny habaka rehetra misy ny fivoahana. Ny lakaly vaovao matetika dia mivoaka tsara kokoa, fa ny any ambanin'ny tany taloha kosa dia mora mitete. Hamoaka tsimoramora ny rindrina ny rano tafaporitsaka ary hanimba ny fitaovana. Ity ny ...
Ny firafitry ny rafitra sinema tsy miankina ambony
Inona no tafiditra ao amin'ny sinema tsy miankina ambony, ny fametrahana ny rafitra sinema tsy miankina ambony sy ny sinema tsy miankina ambony, ny fomba fanaovana ireo, avelao i Zhongle Bianxiao hampahafantatra anao. Ny firafitry ny rafitra teatra tsy miankina ambony (inona ny atiny tafiditra ao amin'ny teatra tsy miankina ambony), ity misy bebe kokoa ...
Paikady azo ampiharina amin'ny fananganana teatra an-trano
Rehefa miditra amin'ny sehatry ny fampandrosoana haingana ny toekarena ara-tsosialy, maro kokoa ireo fianakaviana an-tanàn-dehibe no vonona kokoa ny hijery sarimihetsika ao an-trano, izay afaka misoroka ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao an-tanàna amin'ny faran'ny herinandro ary afaka mankafy malalaka ny fotoam-pilalaovan'ny fianakaviana sy ny ankizy. Noho izany, fananganana sarimihetsika sy fahitalavitra h ...
Karazan-trano inona no mety amin'ny haingon-trano sy famolavolana teatra an-trano?
Betsaka ny olona variana amin'ny sarimihetsika sy mozika no te-hametraka teatra manokana any an-trano mba hahafahan'izy ireo mahatsapa ny hafaliana amin'ny sarimihetsika sy mozika amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, misy fanontaniana hafa manelingelina ny rehetra, izany hoe, karazana efitrano inona no mety amin'ny teatra tsy miankina. Na dia maro aza ny olona ...
Famolavolana haingon-trano teatra tsy miankina, izay fombanao no lovanao
Amin'izao fotoana izao, nanjary fironana ny fametrahana teatra tsy miankina, ary mihamaro hatrany ireo mpankafy audio-visual an-trano no manongilan-tsofina amin'izany, manantena ny hanangana teatra tsy miankina an-trano izay afaka miditra ao amin'ny fomba fanaingoana azy ireo. Satria ny fenitry ny hatsarana rehetra a ...
Tsy fifankahazoana marobe amin'ny fitsaboana akustika ny teatra an-trano tsy miankina
Tsy mila mandeha any amin'ny teatra fivarotana lehibe isan-karazany isika hijerena sinema, satria ny fanaingoana, ny fametrahana ary ny fananganana teatra tsy miankina an-trano manokana dia lasa safidin'ny ankamaroan'ny tompona. Ny tontolon'ny fijerena trano mahazo aina sy ny effets audio-visual manaitra dia manana ...
Inona avy ireo torohevitra momba ny fividianana tetikasa
Voalohany indrindra, ny haben'ny habaka Ny safidin'ny projector dia tsy maintsy miankina amin'ny haben'ny habaka. Raha apetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ny efitrano fandraisam-bahiny dia tokony ho malalaka tsara. Amin'ny ankapobeny, ny velaran'ny efitrano fandraisam-bahiny dia tokony ho 20 metatra toradroa mahery, raha tsy izany, raha kely loatra ny habaka dia aza ...
Ahoana no hitsarana ny rafitra fanamafisam-peo amin'ny teatra an-trano?
Loharano: Internet Add Time: 2020-11-10 Tsindrio: Marobe ireo marika audio an-tsarimihetsika tsy miankina an-tsena, ary mino ny orinasa rehetra fa ny azy manokana no tsara indrindra. Amin'ny maha-tompona te-hanangana sinema tsy miankina, miatrika marika marobe, sarotra ny milaza izay ilaina. Amin'izao fotoana izao, tena im ...
Ahoana ny fampifanarahana ireo mpandahateny sy fanamafisam-peo an'ny rafitra sinema tsy miankina?
Ireo ao amin'ny indostria dia mahafantatra fa ny vokatry ny rafitra sinema tsy miankina dia vokatry ny fiarahan'ny fitaovana. Noho izany, ireo liana amin'ny cinema tsy miankina dia hijery manokana ny fifangaroan'ny fitaovana rehefa manangana sinema tsy miankina. Inona moa fa ny teatra tsy miankina dia tsy hividy s ...
Ahoana ny fanatsarana ny tontolon'ny fijerena ny rafitry ny teatra an-trano?
Rehefa manana fahatokisan-tena izahay hamorona rafi-teatra tsy miankina manokana ho an'ny fianakavianay, ny tontolon'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fitaovana fandraisam-peo ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny novidiana tamin'ny harena iray dia nahatonga anao tsy afaka nanomboka, ary manomboka miady amin'ny inona ianao manao? Bian Xiao nilaza taminao ...
Inona no hisafidianana ny masinina HD Karaoke VOD? Ny marika iza no tsara
Miaraka amin'ny fandrakofana manerantany momba ny tamba-jotra sy ny teknolojia niomerika, vokatra elektronika marani-tsaina betsaka kokoa, toy ny milina karaoke karaoke voafaritra tsara, TV nomerika avo lenta ary DV nomerika voafaritra avo lenta, no niseho tamin'ny fiainana. Kalitaon'ny sary voafaritra tsara sy feo qu ...
Ny safidin'ny milina karaoke karaoke
Masinina karaoke tena malaza any Sina ny milina karaoke. Mizara roa izy io: kinova mijoro irery sy kinova an-tserasera. Ny kinova mijoro irery dia mety amin'ny efitrano fivorian'ny vondrona sy trano hafa, ary ny kinova amin'ny tambajotra dia mety amin'ny fampiasana KTV lehibe. Mampiditra indrindra ...
Player Karaoke Professional - Maninona Ianao no Tokony Hianatra Karaoke
Mba ho mpilalao karaoke matihanina dia mila manana mikrô ianao, ravina mozika vitsivitsy, boky miresaka mozika sy tononkira, ary ny tena zava-dehibe indrindra dia mila milina karaoke ianao. Ny motera Karaoke dia mora vidy amin'ny ankamaroan'ny fivarotana karaoke. Azonao atao ny misafidy na si ...
Fahalalana kely momba ny fanasokajiana mpandahateny
Amin'ny maha-filan'ny fiainana andavanandro, niditra amina fianakaviana an'arivony maro tany Texas ny fiara. Amin'ny maha "sofina" ny fiara azy, ny audio audio no safidy voalohany amin'ny mpankafy fanovana maro. Ny fanovana mety ny audio an'ny fiara dia tsy hanatsara ny kalitaon'ny feon'ny fiaranao ihany fa hanatsara ny fivezivezenao koa. Izaho ...
Fanasokajiana ireo mpandahateny
Ny fanamafisam-peo dia matetika antsoina hoe tandroka. Raha tsorina, izy ireo dia fitaovana elektro-acoustique izay afaka mamadika ireo signal elektrika ho lasa feo. Izy ireo dia fitaovana ilaina amin'ny rafi-peo. Amin'ny maha iray amin'ireo transducer electroacoustic izay manova ny angovo herinaratra ho angovo feo, ny kalitao sy ny charac ...
Endri-javatra ny milina karaoke
Natao manokana ho an'ny fampiasana fianakaviana, ny ankamaroan'ny masinina karaoke eny an-tsena dia novolavolaina ho an'ireo toerana KTV, tsy nandinika izay ilain'ny olona ao amin'ny fianakaviana. Tena mety amin'ny fampiasana fianakaviana: mora entina, famakiam-boky feno, arak'izay azo atao mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa, mety ny habe ...
Masinina Karaoke ao amin'ny fianakaviana
Masinina karaoke karaoke matetika no antsoina hoe milina karaoke karaoke. Ireo milina karaoke voalohany indrindra dia ireo «recorder tape cassette», izay manana feo fotsiny fa tsy misy sary. Taorian'ny nivoahan'ny fandraisam-peo video tamin'ny taona 1970 dia navaozina ho sary sy lahatsoratra ny karaoke, ary naseho ny sary sy ny tononkira tao ...
Ankafizo Karaoke amin'ny fihirana Miaraka amin'ny Masinina Karaoke
Ny fividianana rafitra karaoke dia mety ho fampanjariam-bola lehibe, fa raha dinihinao tsara dia ho hitanao fa be dia be ny vola azo.karaoke system ktv Mahazo tombony amin'ny fanananao mpiteny karaoke anao manokana, ary afaka mampiasa ianao ao an-tranonao izy ireo. Tsy mahazo tsara noho io. Wh ...
Ny momba ny rafitra Karaoke rehetra
Raha nanandrana nitady fomba hankafizana mozika sy fihirana miaraka amin'izay ianao, dia ho liana amin'ny fianarana ny fomba fampiasana rafitra karaoke. ny hafa. Rehefa mihira amin'ny milina karaoke ianao, ...
Powered DJ Speaker Systems - Torolàlana fohy amin'ny fitadiavana ireo mpandahateny DJ mety
Betsaka ny olona mampiasa ny teny hoe "mpandahateny DJ" hamaritana ny fanamafisam-peo izay natao hamoahana mozika mafy amina olona marobe amin'ny feon-kira iray be any amin'ny toerana malalaky ny besinimaro. Mpandahateny dj mahery Ny klioban'ny dihy tsy ara-potoana dia ohatra amin'ny ...
Inona no atao hoe mpilalao Karaoke?
Ny mpilalao KTV Karaoke dia fitaovana lehibe ho an'izay mitady hihaino ny mozika ankafiziny na koa hiditra amin'ny tontolon'ny karaoke.ktv karaoke mpilalao karaoke maro ny olona tia karaoke sy ny fahafinaretana miaraka aminy. Raha anisan'ireo olona ireo ianao ary te handray ny hiranao sy ny pe ...
Ny tsy fitoviana eo amin'ny milina iray mikasika ny rehetra amin'ny solo-saina sy ny solosaina mahazatra
Voalohany, fisehoana Solosaina mahazatra, ao anatin'izany ny solosaina birao sy kahie, ny habe mahazatra indrindra dia 14,5 ka hatramin'ny 22 santimetatra; na dia azo zaraina ho modely maro aza ny milina fanoratana rehetra-amin'ny-iray masinina, ahantona amin'ny rindrina ny milina rehetra izay apetraka mivantana amin'ny tany, ny si ...
Iza amin'ireo fampisehoana indostrialy no tsara kokoa?
Ny safidin'ny fampiratiana indostrialy dia tsy lafo kokoa fa ny tsara kokoa, fa ny mifidy ny vokatrao manokana arakaraka ny filanao ary manome anao traikefa mety indrindra. Ity manaraka ity dia manazava ny fomba hisafidianana fampisehoana indostrialy mety indrindra amin'ny fomba fijerin'ny fiainana any aoriana, hatsiaka ...
Inona no hotadiavina amin'ny milina Karaoke
Efa nandre momba ny rafitra Karaoke KTV ve ianao? Ity dia fampiononana farany farany an'ireo fitaovana fialam-boly rehetra natao ho an'ny fialam-boly ao an-trano.ktv rafitra karaoke machine Amin'ny teny faran'izay tsotra, ny rafitra Karaoke KTV dia TV izay novaina mba ho masinina Karaoke. Toy ny ...
Mianara mihira Karaoke - Inona no tokony hoheverinao
Famaritana: fampiharana mozika an-tserasera amerikana natomboka voalohany tamin'ny anarana Karaoke tamin'ny 2021 ary avy eo tamin'ny fitaovana iOS tamin'ny 2021.sing karaoke Ny fandaharana dia nifantoka tamin'ny fianarana fomba nentim-paharazana Japoney nihira toy ny teknika fofon'aina, feo, feo, kabary ary tononkalo. Ao amin'ny l ...
Ny mozika Karaoke dia misy gadona izay napetraka amin'ireo hira nohirain'ny mpihaino. Ny mozika Karaoke dia tsy mitovy amin'ny endrika mozika hafa satria ny ankamaroany dia hiraina mandritra izany. Manome karaoke ho an'ny spontaneity fanampiny i karaoke, izay vao mainka mahafinaritra kokoa ny mihaino azy. rafitra karaoke izay toerana ...
Misafidiana rafitra mikrô tsy misy tariby
Ny Cordless Microphone Systems dia lasa malaza amin'ny mpitendry zavamaneno sy ny mpitia mozika hafa. Tsy ilaina intsony ny manahy momba ny tariby mampifandray fitaovana hafa isan-karazany intsony, na manahy ny amin'ny headset na sofina tsy mifanaraka. Ny rafitra mikrô tsy misy tariby dia mahomby ...
Ireo lafin-javatra tokony hodinihina rehefa mividy mikrô mikrô Karaoke
Raha eny an-tsena ianao mba hanana rafi-karaoke vaovao any an-trano, dia te hijery ireo safidy azo ampiasaina amin'ny mikrô ihany koa ianao. Mikrophone rafitraaraara Ny kalitaon'ny feonao dia zava-dehibe indrindra rehefa mihira ianao ary tena ilaina izany manana fitaovana mety hahafahanao mihira s ...
Tombony azo amin'ny milina Karaoke azo entina
Raha hampiasa milina karaoke azo entina ianao dia mety satria te handray fihirana any amin'ny ambaratonga manaraka ianao. Fantatrao fa mahasosotra izany rehefa misy olona mihetsika be loatra na manandrana mampihomehy na manan-danja kokoa, rehefa tsy mihira mihitsy izy ireo. Masinina karaoke azo entina mamela anao hihira rehefa ...
Ahoana no hividianana mikrô tsy misy tariby anao manokana? Inona avy ireo fomba hividianana mikrô tsy misy tariby
Ny microphone amidy eny an-tsena dia mizara roa amin'ny ankapobeny araka ny lohan'ny pikinga: ny iray mikrô mikônona, izay miavaka amin'ny kalitaon'ny feo tsara ary tsy mila famatsiana herinaratra; ny iray hafa dia mikraoba condenser, izay miavaka amin'ny faharetana. Salama ...
Ahoana ny fametrahana ny mikrô ao amin'ny efitrano fivoriana feno fahendrena
Ny microphone fihaonambe dia toa olona tsotra, saingy tsia. Izy io dia rafitra haino aman-jery matanjaka izay misy karazana fitaovana manankarena. Rehefa voalamina araka ny filan'ny mpanjifa isan-karazany ny rafitry ny kaonferansa vao afaka manararaotra ny fampiroboroboana ny rafitry ny kaonferansa ...
Tokony hividy milina Karaoke vaovao ve aho?
Misy karazany maro ny rafi-karaoke ao an-trano eny amin'ny tsena.karaoke machine system Ny sasany amin'izy ireo dia rafi-peo tsotra mamela anao hihira amin'ny mikrô, ary avy eo dia hilalao ny feonao ilay mpandahateny. Ny hafa dia feno miaraka amin'ny solosaina izay mamela anao hilalao feo mandeha ...
Mitady Mesin Karaoke Miaraka amin'ireo Hira Hiraina
Raha mieritreritra ny hametraka milina karaoke ao an-trano ianao dia mila mandinika zavatra vitsivitsy. Raha te-ho afaka hihira miaraka amin'ireo hira tianao ianao ary hampitsoka ny olona anao dia tokony hivoaka daholo ianao. Makà milina karaoke tsara indrindra miaraka amin'ireo hira tianao sy izay ...
Fampivoarana ireo mpandahateny tsy misy tariby amin'ny ho avy
Tombanana fa manomboka amin'ny 2021 ka hatramin'ny 2026, ny tsenan'ny mpandahateny tsy misy tariby manerantany dia hitombo amin'ny taha-pivoarana mitombo isan-taona mihoatra ny 14%. Ny tsenan'ny mpandahateny tsy misy tariby (voaisa amin'ny fidiram-bola) dia hahatratra fitomboana 150% mandritra ny vanim-potoana mialoha. Nandritra ny vanim-potoana 2021-2026, marke ...
Vahaolana fanamafisam-peo an-telefaona mpandahateny an-telefaona
Miaraka amin'ny fivelaran'ny finday marani-tsaina dia nanjary nilaina lehibe teo amin'ny fiainantsika ny finday. Izy ireo dia tsy ampiasaina ho fitaovana fifandraisana, fa koa fialamboly, fandoavam-bola ary vibrato. Izy io dia afaka mitondra fahafaham-po ho antsika. Na izany aza, raha tsy misy ny fiasan-tsolika amin'ny finday, ary tsy nahy ...
Ny anjara andraikitra sy ny tombony ary ny fatiantoka ny fanamafisam-peo
Ny fanamafisam-peo miharo fanamafisam-peo dia antsoina hoe fahombiazana voafaritra. Ny asan'ny amplifier natambatra dia ny fanamafisana ny herin'ny famantarana herinaratra malemy alefan'ny boriborintany voalohany, ary hiteraka fantson-drano ampy handraisana ilay mpandahateny hamita ny fiovam-po elektro-acoustika ....
Fampidirana fohy ny fanamafisam-peo
Ny fanamafisam-peo dia fitaovana mamerina ny fambara audio fampidirana ao amin'ilay singa famoahana izay mamokatra ny feo. Ny haavon'ny mari-pamantarana sy ny haavon'ny herinaratra namboarina dia tokony ho marina, fahamarinana ary fanodikodinam-bola ambany. Ny elanelam-peo dia manodidina ny 20Hz ka hatramin'ny 20000Hz, noho izany ny amplifier dia tokony hanana tsara ...
Fampidirana masinina Karaoke
Ny masinina karaoke dia mizara ho: milina karaoke irery sy milina karaoke an-tserasera. Nozaraina roa: milina karaoke ara-barotra, milina karaoke an-trano 1. Ny olona tia mozika, tia mihira, ary te ho tonga mpihira malaza: Mandrosoa KTV mody, mihira araka izay tianao, ary lasa anao ...
Mizana tsena masinina Karaoke tamin'ny 2021
Ny haben'ny tsenan'ny indostrian'ny milina karaoke amin'ny 2021 dia mifototra amin'ny fikarohana marobe sy fanaraha-maso angon-drakitra manarona indostria lehibe (ao anatin'izany ny vokatra sy ny vokatra azo avy amin'ny vokatra na indostria kendrena ao anatin'ny fotoana voatondro, sns., Mifototra amin'ny ny mponina, ny filan'ny vahoaka, ...
Fampidirana mikraoba tsy misy tariby
a. Modely Qualtz LOCked: mampiasa oscillator quartz izy io mba hiteraka matetika sy marimaritra iraisana maharitra amin'ny famindrana sy fandraisana. Tsotra ny fizaran-tany ary ambany ny vidiny. Io no famolavolana fizarana mahazatra an'ny mikrôfôna tsy misy tariby ankehitriny. Ity karazana mikrô sy mpandray ity dia mety ...
Fizarana matetika mikrô tsy misy tariby
Ohatrinona ny fahita matetika eo amin'ny fizarana V sy ny U-ampahan'ny mikrô tsy misy tariby U-segment ary ny V-segment izay mampiasa zana-pandrefesana fampitana onjam-peo samihafa. Izy ireo dia bande radio radio amateur daholo. Ny tarika UHF dia tarika haingam-pandeha avo indrindra miaraka amin'ny refy afovoany 145 MH ...
fampiharana fanamafisam-peo Bluetooth
1. Adapter amplifier Bluetooth misy interface interface USB maro karazana: karazana kapila tselatra, karazana Mini Key, karazany aforitra, boaty. Ampiasaina amin'ny solosaina Windows misy port USB sy Mac misy Mac OS X. Ohatra, PCGA-BA1 an'ny Sony, kely sy mahafatifaty, 5g ihany, ny jiro famantarana ny rambony dia manome jiro manga ...
Fampidirana ny fanamafisam-peo Bluetooth
Ny amplifier Bluetooth dia karazana teknolojia fampitana tambajotra tsy misy tariby. Tamin'izany fotoana izany, efa ela no nisy ny teknolojia tsy misy tariby, ary ny sasany tamin'izy ireo aza dia niditra amina dingana matotra mihitsy. Ohatra, ny teknolojia infrared dia hita amin'ny vokatra elektronika mpanjifa isan-karazany toy ny home a ...
Amin'izao fotoana izao dia mihamaro ny olona mampiasa mpilalao karaoke maoderina hanamaivanana ny tsindry amin'ny asa sy ny fiainana mianatra. Ny olona sasany dia ao amin'ny KTV, saingy maro ny olona tia mihira ao an-trano, izay tsy vitan'ny hoe mety fotsiny fa mifanaraka kokoa amin'ny fanirian'ny olona hampifaly ny vokatry ny audiovisual. Mpilalao Karaoke ...
Fitaovana Karaoke ankoatry ny mpandahateny, ny fitaovan'ny mozika dia tena zava-dehibe, ny kalitaon'ny fanamafisam-peo ihany koa no tena zava-dehibe. Ny fiasan'ny KTV dia tokony hampifangaroina amin'ny haben'ny efitranonao sy ny fitaovanao haingon-trano. Ny faritra samihafa amin'ny efitrano dia tokony mampiasa fanamafisam-peo isan-karazany. Tandremo ...
Ny trano heva misy anay ao amin'ny Canton Fair sy ny Hongkong Electronics Fair
Ny anaran'ny karaoke dia avy amin'ny teny japoney hoe "fahabangana" sy "orkestra". Miankina amin'ny zava-misy ao anatiny, ny karaoke dia mety hidika ho karazana toeram-pialamboly, fihirana ho any aoriana, ary fitaovana hamoahana ny backtracks. Na inona na inona sahan-kevitra misy azy dia sary mikrô hatrany, hazavana mamirapiratra no asehontsika sary ...
Mikropono Portable Karaoke, Usb Cd Player Ho an'ny Fiara, Karaoke Mikrofona Wireless, Mpilalao Karaoke Portable All-In-One,